DAAWO Jamaal Cali Xuseen Oo Ka Hadlay Arimo Badan “Khilaafkii UCID Muu Dhamaanine Wuxuu Isku Badali Doonaa Halgan |
DAAWO Jamaal Cali Xuseen Oo Ka Hadlay Arimo Badan “Khilaafkii UCID Muu Dhamaanine Wuxuu Isku Badali Doonaa Halgan
Musharaxa madaxwayne ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga hadlay arimo badan oo xasaasi ah.
Ugu horeyn Jamaal waxa uu sheegay in ay dib u dhiggeen shirkii ay garabkoodu maanta u balansanaayeen,isaga oo sidoo kalena sheegay in aanu dhamaan khilaafkii xisbiga UCID balse uu hadda isku badal halgan dheer oo uu sheegay inuu la galayo cid kaste oo ka danbaysay burburka xisbiga UCID.
Sidoo kale Jamaal Cali Xuseen ayaa carabka ku dhuftay tusaalayaal-na usoo qaatay siyaasiyiin halgan dheer usoo galay xabsiyana usoo galay sidii ay is badal dhaba uga samayn lahaayeen dalalka ay ku nool yihiin waxaana uu sheegay in isna ay ka go’an tahay inuu is badal ka dhaliyo dalka,uuna kashifi doono cid kaste oo ka danbaysay in ay musharaxnimadiisa duulaan kusoo qaadaan.
Qoraalkan oo xasaasi ah isla markaana uu kaga hadlayo arimo badan ayaa waxa uu u dhignaa sida tan
Dhamaan Taageerayaasha iyo Dadka Cadaaladda Jecel ee Somaliland waxaan u sheegayaa in halgankii aynu doonaynay in aynu dalkeena jihadda saxa ah u horseedno aanu dhamaan oo aanay niyad jabin markay arkaan sida waalida ah ee ay cadaaladdii iyo dimuqraadiyaddii dalku u shaqaynayso.
Inshallah aynu sideenii iskugu duubnaano; waanan idinla socodsiin doonaa talaabooyinka aynu qaadi doona. Hantidda ugu weyn ee xisbiyaddu waa taageeradda dadka. Marnaba ka ogolaan mayno in cadaalad daro ay dalkan ka dhacdo, ummaddana marwalba saaqid siyaasadeed soo hor-joogsan maayo; Waanu idinla soo socodsiin doonaa. kUN JEER BAAN U MAHADINAYAA DADKII I TAAGEERAY EE XAQA TAAGEERAY”.